Mid kamid ah Saraakiisha ugu caansan libya oo la dilay | Allbalcad Online
Home WARARKA Mid kamid ah Saraakiisha ugu caansan libya oo la dilay
Mid kamid ah Saraakiisha ugu caansan libya oo la dilay
Jeneral Maxamuud Mustafa Busayf Al-Werfalli oo ka tirsanaa Kooxaha ku dagaalama dalka Liibiya ayaa la sheegay in toogasho lagu dilay.
Sarkaalkaasi oo taabacsanaa Ciiddanka Qaranka Liibiya ee LNA ee uu Taliyaha ka yahay Marshal Khalifa Xaftar ayaa la sheegay inay dabley aan la aqoonsanin ku dileen magaalladda 2-aad ee ugu weyn dalkaasi ee Benqaasi oo ku taalla Bariga dalkaasi.
Dableyda waxay rasaas ku fureen gaari uu la socday Sarkaalkaasi, oo ay dhaawacyo culus soo gaareen isaga iyo nin ay ilmo adeer yihiin oo magaciisa lagu soo koobay Ayman.
Ilo-wareedyo la hadlay Wakaalladda Wararka ee AFP ayaa sheegay inay labadoodaba geeriyooday, markii la geeyey Rugta Caafimaadka ee Benqaasi (The Benghazi Medical Centre), oo ku yaalla meel ku dhow halka lagu toogtay Jeneral Maxamuud Mustafa Busayf Al-Werfalli.
Afhayeen u hadlay Ciiddanka Khaaska ee Khaliifa Xaftar waxa uu xaqiijiyey in la dilay Jeneralkaasi ay Maxkamadda ICC doondoonaysay.
Ma jirto koox sheegatay mas’uuliyada dilkaasi.
Al-werfalli waxaa doondoonaysay Maxkamadda Caalamiga ee Dembiyadda ee ICC oo ku taalla magaalladda The Hague ee dalka Netherlands, waxaana loo haystaa dilkii in ka badan 40-qof, oo ay ku jiraan shil dhacay sanadkii 2018-kii.
Sawiro xilligaasi la so obandhigay ayaa waxaa ka muuqday Jeneralka oo gacantiisa ku toogtay 10 Maxbuus oo Indhaha ka xirnaa, kuwaasi oo bishii Janaayo 24-dii ee sanadkii 2018-kii ku toogtay meel ku dhow Masjidka Bi’at Al-Ridwaan ee magaalladda Benqasi.
Isbuucii la soo dhaafay, RW dowladda Midnimada Qaran ee Liibiya, C/Xamiid Dabibah waxa uu sheegay inay Xukuumadiisa KMG furi doonto baaritaan, kadib, markii maydad laga helay Qabuur-wadareed ku yaalla magaalladda Banqasi.
Wasaaradda Maaliyadda ee dalka Maraykanka waxay bishii December ee sanadkii 2019-kii Jeneral Maxamuud Mustafa Busayf Al-Werfalli ku dareen Liiska Cunaqabataynta, iyagoo ku eedeeyey inuu geystay Tacadiyo ka dhan ah Xuquuqda Aadanaha.
Haddaba, maxaynu ka naqaanaa sababaha ay Maxkamadda ICC u baadi-goobayeen Jeneral Maxamuud Mustafa Busayf Al-Werfalli oo dhashay sanadkii 1978-dii
Amarkii Soo-qabashadiisa ee ugu horeysay waxay Maxkamadda Dembiyada Caalamiga ee ICC soo saartay bishii August ee sanadkii hore, iyadoo lagu eedeeyey Sarkaalkaasi inuu bixiyey amarka dilka ama uu gacantiisa ku fuliyey 7 Fal dil ah, muddadii u dhexeysay bishii March iyo July ee sanadkii 2017-kii iyo bishii June ee sanadkii 2016-kii.
Filimo laga qaaday dilalkaasi ayaa la soo dhigay Warbaahinta Baraha Bulshada.
Amarkii Labaad ee Soo-qabashadiisa, waxay Maxkamadda ICC soo saartay bishii July 5-dii ee sanadkii hore, iyadoo lagu eedeeyey mas’uuliyada dil Dembi Dagaal ahaa.
Ciiddamo u daacad ah Khaliifa Xaftar waxay bishii August ee sanadkii hore sheegeen inay xabsiga dhigeen Jeneral Maxamuud Mustafa Busayf Al-Werfalli, isla markaana uu Dacwad-oogaha Guud ee Ciiddanka bilaabeen baaritaanka dilalka uu ku eedeysnaa.
Haweeyenda Dacwad-oogaha Guud ka ah Maxkamadda ICC, Fatou Bensouda oo u dhalatay dalka Gambia waxay ku celcelisay Baaqa ku aadanaa inuu Khalifa Xaftar soo wareejiyo Sarkaalkaasi oo Dembiyo-dagaal loo haysto.
Khudbad ay Golaha Ammaanka ee QM ka jeedisay bishii November ee sanadkii 2017-kii waxay kaloo ku baaqday in la soo xiro Seyful-islaam Qadaafi oo ah Wiil uu dhalay Hoggaamiyihii hore ee dalka Libiya, Kolonel Mucamar Al-qadaafi.
Waxay kaloo amartay in la soo xiro Madixii hore ee Ammaanka Gudaha ee Libiya, Al-tuhmy Maxamed Khalid, oo loonhaysto inay geysteen dembiyo-dagaal.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo lagu eedeeyay Musuq maasuq
Next articleMadaxda dowlad Goboleedyada oo la kulmaya Wakiilada Beesha Caalamka